Kedu ọnọdụ ọnọdụ akwa na mbupụ uwe na ọkara nke abụọ nke afọ?
Texzụ ahịa akwa na akwa nke China bụ ihe a na-ahụkarị na ọkara mbụ nke afọ a n'ihi mgbasa zuru ụwa ọnụ nke COVID-19.Na abata na Mee na June, ụfọdụ data enwetala. Ọnọdụ zuru oke na ọkara nke abụọ nke afọ dị mgbagwoju anya ma gbanwee, anyị ka kwesịrị ilebara ya anya karị. A ...
Nri abalị nke ndị ọrụ tupu ememme oge opupu ihe ubi nke 2020, chekwaa ike iji mepụta afọ owuwe ihe ubi na-esote!
Na njedebe nke 2019, anyị ga-achikota ọrụ nke afọ gara aga, na-ekwusi ike pụrụ iche na nsogbu na ọrụ, ma mee ka onye ọ bụla cheta ịrụ ọrụ ka mma na Afọ Ọhụrụ. Anyị nwere onye na-eme nsụgharị nke nkewa, ihe atụ abụọ ahụ ọrụ, a Production manager, a zuo, a QC, onye na mwepu ego, anọ sa ...
site ha na 19-12-17
Ihe ngosi a bu nke emere na Moscow, Russia na ufodu obodo ndi di nso bu ahia mbu anyi. Anyị nwere otutu ndi ahia ndi ha na ha na aru oru karie 10 years.With mmejuputa iwu nke otu Belt And One Road na China, anyi nwere wetara ngwaahịa pụrụ iche maka mar ...
Anyị ga-aga International Sourcing Expo Australia na 20-22 Nov, 2018 na Melbourne. Bolọ ntu anyị No bụ V27.You na-anabata gị ileta anyị ụlọ ndò maka ọhụrụ aghụghọ. Na-atụ anya izute gị ebe ahụ. Nke a bụ oge mbụ anyị na-aga Melbourne ngosi, ndị na-azụ ahịa na ihe ngosi ...
Ime Anwansi 2018
Izute gị na Ime Anwansi na Las Vegas na 11-14 Feb, 2018. Bolọ ndò anyị bụ 63217-63218. Are na-nnọọ ka ileta anyị ụlọ ndò na-elele anyị ọhụrụ imewe. Na-atụ anya izute gị. Nke a bụ oge nke anọ anyị iji gaa ngosi a, bụ nke anyị siri wee mebe mmekọrịta anyị na ụfọdụ mkpụkọ ...